caawimo xagga sharciga ah ee qaxootiga iyo soo galootiga | Marka si aad u hesho qareen | USAHello
Gargaarka sharciga iyo adeegyada ee USA lacag badan ku kici kara. arrimaha khuseeyo sharciga noqon karaan kuwo lagu wareero. Mararka qaarkood, way adag tahay in la ogaado marka si aad u hesho qareen. Haddii aad tahay qaxooti, waxaad ka codsan kartaa wakaaladda dejinta wixii talo.
Goorma ayaan qaataa qareen?
Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah marka laga yaabaa in aad rabto in aad hesho qareen. Kuwaan ayaa ah tusaalooyinka ka Bar Association American ka iman, urur qaran oo caawiya dadka qaba xaaladaha sharci:
Haddii lagugu hayo by booliska ee garoonka diyaaradaha ee meel kale
Haddii aad takooray
Haddii lagu xiro by booliska
Haddii lagu siiyo waraaqaha rasmiga ah ee dacwad
Haddii aad shil weyn halkaas oo jidh ahaan waxaa kugu yeelo ama meesha adiga ama qof kale ee hantida waa duntay
Haddii aad qabto dhacdo qoys weyn ama la bedelo sida furiinka, korsashada, ama dhimasho. Si kastaba ha ahaatee, inta badan uma baahnid qareen si aad u guursato.
Haddii aad leedahay si aad u gudbiso kacday, sababtoo ah aadan haysan wax lacag ah inay bixiso deynta.
Turjubaanka ee goobaha sharci
Sida ku cad sharciga Mareykanka, haddii aad raadineyso caawimo ama looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay'ad dawladeed ama urur maalgelisay dawladda dalka, waa in aad la siiyaa caawimaad luqadda. Haddii aadan si fiican ugu hadlin Ingiriisiga, waxaad heli kartaa turjubaan for adeegyada soo socda:
Gobolka iyo kuwa maxalliga maxkamadaha in lacag ka socda dawladda Maraykanka heli
Hay'adaha Federaalka sida Adeegga Socdaalka Social Security Administration iyo Dhalashada US iyo
hay'adaha dowladda ee Gobolka iyo kuwa maxalliga ah in ay helaan lacag oo ka socda dawladda Maraykanka sida adeegyada bulshada ee degmadaada, xafiiska, ama xafiiska shaqo la'aanta
Xafiisyada adeegyada Legal in lacag ka Legal Services Corporation ama hay'ad kale ee dawladda Maraykanka u hesho si ay u bixiyaan adeegyada sharciga oo bilaash ah
waaxda Police in lacag ka socda dawladda Maraykanka heli
Hospitals in lacag ka socda dawladda Maraykanka heli
Dugsiyada lacag ka socda dawladda Maraykanka heli
Waxaad badan oo ku saabsan baran kartaa xaqa aad u leedahay kaalmada ee afkaaga: macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan Access Language Federaalka Rights.
Haddii aad tahay qof ee maxkamada laanta socdaalka, waa in aad kaliya ka hesho caawimo garyaqaan liisan leh ama wakiil la aqoonsan yahay. Waa arrin aad u muhiim ah in aad caawimaad socdaalka oo kaliya ururada ama shakhsiyaadka ansixiyey Gudiga Socdaalka ee Racfaanka heli (Bi'ir). Haddii aad weydiiso saaxiib ama qoys gargaar, ay si qalad ah ayaa kuu sheegi laga yaabaa in macluumaad aan sax ahayn in aad heli karto in dhibaato adeegyada socdaalka.
Haddii aad u baahan tahay caawimo sharciyeed ee socdaalka, Waad awoodaa heli qareenka qiime jaban iyo kaalmo sharci. Haddii aad isticmaalayso website internetka ah si aad u hesho foomamka sharciga ah, hubi in aad isticmaalayso ah kaAdeegyada Socdaalka fficial United States Citizenship and (USCIS) website.
Akhri macluumaadka this si aad iskaga dadka aan sharciga yiqiin dhab ah loo ilaaliyo! Waxaa jira dad iskadhiga doono inuu ku caawiyo si ay u sii kartaa money.They isku dayi doonaa in aad bixiso adeeg sharciga ama socdaalka, laakiin ma run ahaantii aad u caawin. Baro sida loo aqoonsado oo aad naftaada ilaaliso!
Xarunta Waxtarmada Legal Immigrant The (ILRC) Macluumaad in aad ka khiyaamo ilaaliyo dhigtay. Waad awoodaa akhriska iyo soo bixi macluumaadka ku jira Ingiriisi. Ama aad awoodid akhriska iyo soo bixi macluumaadka ku jira Isbaanish. Ka hor inta aadan u hesho qareen, hubi in aad la hadasho maamulaha kayska ama qof aad ku kalsoon tahay oo aad bulshadaada.
Macluumaadka on this page ka timaadaa LawHelp.org oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.